ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : MODY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ARY MANGATAKA AZY HILATSAKA HOFIDIANA NY VAHOAKA – MyDago.com aime Madagascar
Vory lanona teny amin’ny Magro Behoririka androany ireo mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Tonga teny an-toerana ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy, ny filoha lefitry ny Cst Me Razafimanantsoa Hanitra ary ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny Ct sy Cst. Anisan’ny nandray anjara fitenenana teny an-toerana ny Me Hanitra. Niompana tamin’ny fivorian’ny Sadc farany teo ny lahateniny. Nisy hoy izy ny fivoriana nataon’ny Toika Sadc, ka nisy ny tatitra nataon’ny miaramila ao amin’ny Troika, sy Chissano. Nisy ny fanapahankevitra lehibe nivoaka tao ary ho tanterahina. Isika hoy Me Hanitra dia mino ny Sadc ary ny filoha Ravalomanana Marc dia mahatoky tanteraka ny Sadc. Ny voalohan-teny hoy izy dia tsy misy miroaroa saina isika ary tsy manaiky horebireben’ny sasany. Ny fanapahankevitra tany hoy izy dia tsy maintsy tanterahina amin’ny antsipiriany. Eken’ny Sadc ihany koa ny datim-pifidianana ny 08 May izao. Vonona ihany koa ny Sadc hitondra ny anjara birikiny amin’ny fifidianana ary handresy lahatra ny mpikambana ao amin’ny Sadc izy ireo amin’izany. Mody tsy misy fepetra ny filoha Ravalomanana Marc. ny fampiharana ny amnistia dia fampodiana ny sesitany rehetra ka na n’inon’inona lalàna tany aloha misakana ny sesitany dia terena ny governemanta hanafoana azy. Ny kandida roa dia ny filoha Ravalomanana Marc sy Rajoelina dia tokony ho resena lahatra tsy hilatsaka raha toa ka izay no hahavaha ny krizy. Tsy miteny izy hoy Me Hanitra hoe tsy mahazo milatsaka fa misy olona handresy lahatra amin’ny filoha Ravalomanana Marc. Isika hoy Me Hanitra dia handresy lahatra ny filoha Ravalomanana hoe milatsaha ianao. Ny antsika hoy izy dia mody i dada. Ny tsara ho fantatra dia fandresena lahatra no atao hoy ny Sadc ary efa kandida ny filoha Ravalomanana. Ny andininy farany ao amin’ny fanambaran’ny Sadc hoy izy dia milaza fa terena ny governemanta hanafoana ny lalàna manakatsakana ny olona tsy hilatsaka. Matoa izy miteny hoe foanana ireo dia milatsaka izany. Ny filoha ny Ct Rakotoarivelo Mamy dia nanambara fa hampiharina tanteraka amin’ny antsipiriany ny tondrozotra ka anisan’izany ny famoahana ny gadra politika, ny fanehoankevitra malalaka, miverina tsy misy fepetra i dada. Mbola namafisin’ny Sadc ireo hoy izy. Ny fiverenana tsy misy fepetra izay hoy izy dia tsy miera amin’iza fa izay hahatongavany dia ahatongavany. Isika hoy Mamy di a mahlala fomba ka miera amin’ny Sadc hoe rahoviana no iverenany ka alamino ny fiarovana ny ainy. Raha ilaina dia hangataka amin’ny Sadc isika ny handefasany miaramila hanatitra azy aty Madagasikara mandram-pilamin’ny filaminana.
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 décembre 2012 11 décembre 2012 Catégories Politique
13 réflexions sur « ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : MODY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ARY MANGATAKA AZY HILATSAKA HOFIDIANA NY VAHOAKA »
Mahafinaritra!!efa misy FIOVANA taratra kely aloha,
tsy nanome daty sy fe-potoana intsony ,MISAOTRA BETSAKA TOMPOKO isany!!!
Tsara fa efa misy fivoarana e!!
Fa maninona koa ry SADC no MISABABAKA toy izao e!!!te hifidy ny lohany nefa matahotra ny masony.
Dia ny BAINGA MIVADIKA SISA ANDRASANAY ô!!!efa mazava aloha izay TOMPOKO fa mba kosa
aoka tsy ho vitan’ny kabary anio ihany ilay izy ehhh!!!mba miangavy mba asio ZAVATRA MIVAINGANA.
Dia samy ho tahian’Andriamanitra daholo , tsy maintsy mandresy ny TOLONA!!!DADA MODY!!dia ho
Dodokevitra ianareo ao amin´my fitondrana ao ve ry Maitre hanitra tsy mba afaka manokatra Haino aman-jery mba hanaparitahana ny vaovao marina sy mba hanazavana ny tena marina amin´ny vahoaka izay voafahan-dalitra lava izao, Dia ho hita indra izay ataon-dry rolly merci raha ahasahy hanakatona.
Izany eo ihany aloha, fa rehefa mazava ny resaka, ataovinareo izay hampidirana an´i dada haingana fa mandeha ny fotoana sao mahita hevitra maizina hafa indray ny frantsay sy ny FAT . aza ela fanaovan-javatra fa laozan´ny omby miahahaka eo.
kitio ny SADC, sy n CI ary n EU sy Troik sy ny amerikana,….. Ampihatra ny FDR sy ny hampiditra sy hiaro ny fidira i Dada,
Mankasitraka anareo ry Pdt Mamy RAKOTOARIVELO & Me RAZAFIMANANTSOA Hanitra fa tena tanankavanan’i Dada tokoa ianareo aorian’ Andriamanitra sy i Neny Lalao fa tena manao izay hezaka rehetra hampandeha ny tolontsika hatreny ambony latabatra ka hatreny an-kianja hanavotana ity Firenena mamintsika ity izay nosimban’ny kely saina, Ankasitrahana tsy hadinoina ihany koa indrindra ianareo mpitarika rehetra tsy mivadika amin’i Dada ka mbola ao @ Magro mihazona ny hafanam-pon’ny vahoaka, fa MIASA MIARAKA ISIKA, TSY MAINTSY TAFITANTSIKA IO EHHHHHH, MINOA FOTSINY IHANY.
Misajaona >>> Ny tokony tena hezahana atao izao raha ny hevitro, dia ny fanamafisana atao totoafo ny ezaka hanamafisana ny tolona ( na eny ambony latabatra io, na eny an-kianja ) ny hanehoana @ sehatra rehetra na eto an-toerana na ny sehatra iraisam-pirenena fa « ILAIN’NY VAHOAKA MALAGASY HO FILOHAM-PIRENENA HITONDRA AZY NYY FILOHA Marc RAVALOMANANA. Tsy hanipy baolina fotsiny @ mpitarika fa ezaka isika samy isika mihintsy io.
mody mody foana fa rahoviana e ?
mahari-pery ianareo sady tsy misy ambo-po taritin’io bandy kely tsy afa-taim-body io amin’ny sanga.
12 décembre 2012 à 3 h 13 min
ARY Ahoana indray ity ????
MIJALY BE I ELAS – RAOVIANA IANAO NO HANANA FO MILAMINA O! MIHETSIKA BE ILAY RATSY EO AMINAO IZANY FA MITANDREMA SAO MARARY INDRINDRA AMIN’IZAO VANOM-POTOANA KRISMASY IZAO – MAHAIZA MIOVA FO E !
12 décembre 2012 à 10 h 16 min
Aok’izay ry zareo ny resaka be â ! Ingahy Ravalomanana efa fantatry ny rehetra fa niasa irery hatry ny ela, ary mbola manohy an’izany atramin’izao !
Ny zavatra andrasan’ny vahoaka aminareo dia hezaka mivaingana sy « hita-maso », tsy inona izany fa ny fanatanterahana an’ilay tondrozotra ARA-BAKITENY ! Mila averina impiry eto aza izany ?
Mba omeo fahafaham-po ny vahoaka izay niaritra ny mafy nandritry ny efa-taona !
Aoka ianao r’Ingahy Rakotoarivelo mba ho raisin’ireo mpanao gazetinao tahaka, satria mbola maro ireo miteniteny foana atramin’izao !
Mba mangataka anao koa raha tsy maha diso, hanao fanambaràna ao amin’ny Midi Madagasikara, ary ataovy ao amin’ny voaloham-pejy mihintsy, FA TSY MBOLA TERAKA IZANY REPOBLIKA FAHA EFATRA IZANY ! HO MARIK’IZANY ARY, DIA MBA ATSAHARO AZA FADY NY FANAOVAN-TSONIA AMIN’IZAY ANTONTAN-TARATASY REHETRA, MISY HOE « FITIAVANA » ETS…….
Anisan’ny famerenana ny ara-dalàna izany ! ARA-DALÀNA ANTOKY NY FANDRIAMPAHALEMANA SY NY FANDROSOANA !!
Alohan’ny fiverenan’ny Filoha, porofoy amin’ny vahoaka, indrindra ireo avy any avarabaratra any, fa olona tena mbola azo hitokisana marina ianao !
Reraka ny vahoala fa ahoana ihany e ! Nilaza ny filoha fa tsy hitosaka ho fidiana @ volana may 2013. Tsy izao ve ny fotoana hanehoana @ izao tontonlo izao fa mila ny filoha Ravalomanana isika. 1) Miala ao @ io fitondrana tetezamita sandoka io, 2) manao fitikonana faobe 3) midina an-dalambe ho fantatry izao tontolo izao fa miantso ny filoha Ravalomanana ny vahoaka.
Ny hetsiky ny tia taniondrazana any Frantsa koa dia tena zava-dehibe ka ny GTT sy izao tia an’i Madagasikara dia tokony hanao hetsika insan-karazny any Frantsa. Hanehoana fa ilain’ny vahoaka ny filoha Ravalomanana.
iza no betsaka ny vahoaka? teny Antsonjombe sa tao amin’ny magro??? tena vahoaka marina ve ireo @ magro ireo sa andian’olona sisa e?
Fa maninona no tsy maintsy iantsoana artiste vao manangon’olona, iza no lehibe Mahamasina sa Antsonjombe!!!!! Nefa Mahamasina ipoka olona tsy misy asiana podium intsony
Mba tsy nisy magasin vaky ndray t@ io, ny olona manao 4 ans izay tsy nisy avy tao na iray ary, ry foza manao avy dia i Madagasikara iray manontolo mihitsy no voaroba izany no ry peuples malgaches
Ry peuples malgaches no tena atao hoe taranaky ny kmp, hoy i KMD !
Précédent Article précédent : Ampiharo amin-dRajoelina ny satan’i Cotonou
Suivant Article suivant : 12 DEC 2012 : HAPPY BIRTHDAY « DADA RAVALOMANANA »